विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : 'विकल्पका रुपमा मेरो उम्मेद्वारी’–मैनाली | Janaandolan
Home बिबिध विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : 'विकल्पका रुपमा मेरो उम्मेद्वारी’–मैनाली
विर्तामोडमा विगत १२ वर्षदेखि कर्पोरेट हाउस सञ्चालन गर्दै आएका अर्जुनकुमार मैनाली आसन्न फागुन १६ गते हुने विर्तामोड नगरउद्योग वाणिज्य संघ झापाको महासचिवका लागि मनोनयन दर्ता गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघमा निरन्तर एउटै विचारकेन्द्रित नेतृत्व भएपनि उद्योगी/व्यवसायी, व्यापारीको हक–हितका लागि काम गर्न नसकेका कारण विकल्पका रुपमा आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरेको बताउने मैनालीसंग निर्वाचनसंग केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको ।
तपाईलाई भोट किन दिने ?
– उद्योग वाणिज्य संघको ४० वर्षे इतिहासमा व्यवसायीका हितमा नेतृत्वले के काम गर्यो ? यो अवधीमा व्यवसायीका बीचमा चुनावमा जाँदा के–के प्रतिवद्धता लिएर गएको थियो ? र, प्रतिवद्धता गरेका कति कुरा गरे ? आज हामी नयाँ अनुहार लिएर चुनावमा जाँदै गर्दा व्यवसायीले भन्छन् तपाईहरु पनि त्यहि ड्याङको मूला त हो नी ! तपाईहरुलाई भोट किन ? पहिले पनि केही गरेनन् तपाईहरुले पनि के गर्नुहुन्छ भन्ने गर्छन् । यसको मतलव के हो भने व्यवसायीमा अत्यन्तै ठूलो वितृष्णा छ । उद्योग व्यवसाय जस्तो सार्वजनिक संस्थामा बसेर साथीहरुले पहिले गर्नु भएका व्यवहार र कामका कारणले यहाँका व्यवसायीहरु अत्यन्तै रुष्ट र आक्रान्त छन् । त्यसले गर्दा ती सब आक्रान्त भएको व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन र न्यायिक निरुपणका लागि विकल्पका रुपमा हाम्रो उम्मेद्वारी अघि सारेका हौं । हामी नयाँ काम र नौलो प्रगति पथमा अघि बढ्दै नयाँ कार्यदिशामा लानका लागि उम्मेद्वारी दिएको हुँं ।
चुनावमा राजनीतिक रंग देखियो ? यस्तो अवस्थामा तपाईले चाँही काम गर्न सक्नुहुन्छ त ?
– विशुद्ध व्यवसायीको हैसियतले भन्नुपर्दा एउटा न एउटा पार्टीको कनेक्सनमा नगइ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनिन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका उम्मेद्वारले चुनावमा गएर विजय हासिल गर्न गारो छ । हाम्रो यो संस्कारको पराकाष्ठा भनौ या हामीले हिजोदेखि गर्दै आएको अभ्यासका कारण पनि कुनै न कुनै दलसंग आवद्ध भएर उम्मेद्वारी दिनु बाध्यता हो । तर यो ‘नन पोल्टिकल प्लेट’ फर्म भएको र गैरराजनीतिक गतिविधि भएका कारणले गर्दा हाम्रो भनाई के हो भने निर्वाचनमा निर्वाचित भएर गएपछि विशुद्ध उद्योग/व्यापारी/व्यवसायी साथै यहाँ भएका तमाम साना ठूला व्यापारी र मजदुरहरुको हितका पक्षमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा जुनसुकै सरकार भएपनि हामीले सरकारका नीतिसंग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएका कारणले गर्दा हामीले बलियो नेतृत्वको अभाव महशुस गरेका छौं । त्यो भएका कारणले विकल्पका रुपमा सुवास भट्टराईको नेतृत्वमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरेका छौं । हामीलाई अत्याधिक मत दिएर विजयी गराउनु होस् । हामीले व्यवसायीका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
भन्न त सबैले यहि भन्छन् ! तपाईको प्रतिष्पर्धीले पनि भन्ने कुरा यही नै हो तर काम गर्ने कुरामा तपाई आफु कतिको विश्वस्त र प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ?
–पहिलो कुरा के हो भने अर्को पक्षले पनि भन्ने कुरा यही हो भनिरहँदा उनीहरुले यसो भन्ने नैतिक आधार नै छैन । दुई/दुई पटक त्यो प्लेट फर्ममा बसेर काम गरी सक्नु भा, छ । त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुले काम गर्न सक्नु भएन हामीले पनि गर्न सक्दैनौ भनेर बुझियो भने त्यो गलत हुन्छ । हामी विकल्प हो । २७ बुँदे प्रतिवद्धता सहित चुनावी मैदानमा आएका छौं । ति प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँहरु र हामीमा फरक छ । उहाँहरुले नगर्ने कुराको पुष्टि गर्नु भो । हामी गछौं भनेर आइरहेका छौं । हाम्रो बोलीलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो । व्यक्तिगत स्वभाव र पृष्ठभूमिलाई हेरेर पनि आम व्यवसायीलाई विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । किन भने यहाँ उठेका हाम्रा प्रतिष्पर्धी सबै यहीका हुनुहुन्छ । एकले अर्कालाई नचिनेका शायदै नहोलान् । अनुहारको हिसाबले नयाँ भएपनि विगत १०/१२ वर्षदेखि यहि क्षेत्रमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएको छु । त्यसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चिन्नुहुने महानुभावले म के हुँ भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिनु हुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
बुँदागत रुपमा विश्वास गर्ने आधार के के हुन् ?
विश्वास गर्ने आधार पहिलो कुरा हामीले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौं । त्यो अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक शौचालय, सडक वत्ती, सीसी टिभी क्यामेरा, सार्वजनिक पार्किङ, रात्रीकालीन बजार सञ्चालन लगायतका तमाम मुद्दालाई उठान गरेका छौं । यहाँ प्रश्न आउँछ ठाउँ छैन–सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाउनु हुन्छ ? विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्र भित्र धेरै ठाउँमा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य गोदाम, सडकको जग्गा पनि अतिक्रमण र खाली बसेको अवस्था छ । हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलेर त्यो ठाउँलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्छौं । त्यो भन्दा माथि उठेर हामीले लिमिटेड कम्पनीको समेत परिकल्पना गरेका छौं । यहाँ साना ठूला व्यवसायीलाई एकतावद्ध गर्नका लागि र सानो पूँजी भएकालाई पनि मालिकको अपनत्व गराउनका लागि त्यो परिकल्पना गरेर घोषणा पत्र तयार गरेका हौं । हाम्रा प्रतिवद्धता अध्ययन गरेर कुनै पनि जिज्ञासा भए सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । हाम्रो आग्रह के हो भने हामी विशुद्ध सामाजिक क्षेत्रमा लागेर व्यवसायिक हकहितमा काम गर्छौं भन्ने आत्म विश्वास र प्रतिवद्धताका शब्द बाहेक प्रमाणका रुपमा केही पनि छैन । त्यसो भएको हुँदा अगाडिको समितिले काम गरेन भनेर फेरि त्यही समितिलाई निर्वाचित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि विकल्पलाई प्रयोग गरेर हेर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ? त्यो कुरामा विवेक प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
विर्तामोडका व्यवसायीका मुख्य समस्यालाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ? र के छन् ?
वस्तुगत संगठन धेरै छन् । धेरै प्रकारका वस्तुगत खरिद विक्री र उत्पादन हुने यो बजारमा ती बस्तुगत व्यवसायका समस्या आ–आफ्नै छन् । एकको समस्या अर्कोसंग मिल्दैन । उदाहरणका लागि एउटै बजारमा होलसेल र रिटेल पसल खुलेका छन् । होलसेलरले रिटेलरलाई र उपभोक्तालाई बेच्ने दाम पनि एउटै छ । यो समस्या अर्को वस्तुगत व्यवसायसंग नमिल्न सक्छ । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? सम्बन्धित वस्तुगत व्यवसायीसंग छलफल गरेपछि मोडल बनाएर हामी अभिप्रेरित गर्छौं ।
भनेपछि निर्वाचित भएपछि मात्र समस्याको निक्र्यौल हुन्छ ?
–समग्रमा हामीले प्रतिवद्धता पत्रमा धेरै कुराहरु समेटेका छौं । त्यो अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु । चुनावी माहोलमा सबै समस्याको समाधान यसरी गर्छु भनेर मोडल लिएर आउँदै गर्दा धेरैका मुद्दा छुट्न सक्छन् । त्यसो भएको हुँदा समस्याको पहिचान गर्ने विधीको कुरा गरेको छु । हामीले विषय र प्रसंगलाई सहि ढंगले उपयोग गर्न सक्यौ भने समस्याको समाधान निस्कन सक्छ ।
गुनासो राख्ने ठाउँ नभएर हामी ४० वर्षदेखि गुम्सिएर बस्यौं ति आम मतदातालाई मेरो अनुरोध के छ भने विकल्पमा हामीलाई भेट्नु भएको छ । विकल्प हामी हौं । उपयुक्त विकल्प हौं । यो पटक तपाईहरुको अमूल्य मत दिएर यो विकल्पलाई विजयी गराउन अनुरोध गर्दछु ।
Previous articleअर्जुनधारा धाममा ताण्डव नृत्य तथा भजन प्रतियोगिता
Next article‘विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन: हामीसँग मिसन छ भिजन छ’–’भटराई’
बिबिध विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : 'विकल्पका रुपमा मेरो उम्मेद्वारी’–मैनाली